mars 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 29 mars 2021 4 avril 2021
“...Hosana ho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! Hosana any amin'ny avo indrindra…” Matio 21: 1-10
« MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA »
Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika noho ny mbola ahafahantsika miray fo sy fanahy amin’izao fandaharana izao ka ahazoantsika indray mampiorina ny Finoantsika manoloana ny fizahan-toetra sy ny fitsapana iainan’ny Fiangonana. Ity no alahady faha efatra amin’ity volana martsa izay, izay Alahadin’ny Sampandrofia ary Alahadin’ny Asa Fifandraisana eto anivon’ny FJKM. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”.
Ny fotoana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary izy ihany no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia faharoa fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no nanatanterahina izao fanompoana masina izao .
Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo faha 145 and. 1-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra:
“Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany . Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy, Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao, Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy, Sy hihoby ny fahamarinanao. Amen !”
Ny hira FF 9: “Isaorana anie Jehovah” no notanterahina ho fiderana sy nentina nankalaza an’ Andriamanitsika.
Izao no vavaka fisaorana sy fiderana notononina sy nambara teo anatrehan’Andriamanitra :
“Ry Rainay izay any an-danitra ô! Mpamorona sy mpanavotra anay Ianao. Miondrika eto anatrehanao izahay zanakao. Misaotra indrindra Andriamanitra o! Fa tsy navelanao tsy hanana anjara amin’ny fiombonam-bavaka toy izao izahay, fa na dia eo aza ny valanaretina, ny fizahan-toetra iainan’ny Fiangonana dia indreto izahay mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena nampiraisinao amin’ny alalan’izao teknolojia izao ary tonga mitoetra ety an-tokantranonay Ianao, amin’izay misy anay tsirairay avy. Tena fifaliana ho anay izany Andriamanitra ô! Satria avy amin’izany indrindra no andraisanay fahasoavana sy hery indray avy Aminao amin’ity anio ity. Koa asandratray, omenay Voninahitra ny Anaranao masina. Misaotra Anao koa izahay Jesoa Malala ô! amin’izao fomba nitantananao ny fiainanay izao. Teo ny mora, ny sarotra, teo ny mangidy, fa tamin’ireny rehetra ireny dia teo Ianao, Andriamanitra nampahery, nanampy ary nivimbina anay. Koa misaotra Anao amin’ny fonay manontolo izahay noho ny fitahianao anay ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro, hatramin’izao fotoana iarahanay mivavaka Aminao izao. Hitanao ihany koa anefa ny momba anay tsirairay avy ireto, tsy misy miafina Aminao izany. Manana ny heloka izay ibaboanay eo anatrehanao izahay ka mifona , mamelà heloka , mamindrà fo Jesoa Kristy tamin’izay nandehananay tsy araka ny sitraponao. Teo ny fisainanay, ny eritreritray, izay nalehan’ny tongotray , ny fitempon’ny fonay aza dia tsy nahamendrika anay teo anatrehanao. Fa Andriamanitra be fitiavana Ianao ka tsy mitahiry fahatezerana , manolotra famindram-po noho ny amin’i Jesoa Kristy. Koa raisinay amin’ny finoana ny famindram-po, ny famelan-keloka omenao Jesoa Kristy anay tsirairay avy ireto, hanamarina sy hanamasina anay Ianao. Ankehitriny dia tanteraho sy hamasino ary hamarino eto ny Teninao ny amin’ny fanatrehanao ny olona izay mivory amin’ny Anaranao koa amin’izay toerana misy anay avy dia ny fahafenoan’ny Fanahinao Masina anie ho aminay tsirairay avy , hitarika anay hibanjina Anao ka hihaona Aminao Andriamanitra amin’ny alalan’ity fotoana lehibe ity. Ho voninahitrao anie Andriamanitra, izao fanompoam-pivavahana iombonanay eto izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Mpanjaka Tsitoha, ilay omem-boninahitra mandrakizay no hanandratanay izany vavaka izany. Amen!”
Ny Zoky ANDRIAMANANTENA Faramalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy fahafolo no nanatanteraka izany. Taorian’ny fiarahabana dia nanao vavaka fisaorana izy izay nilazany fa mbola manan-kambara amin’ny Fiangonana mandrakariva Andriamanitra. Nangataka ny Fanahy Masina izy, hiasa ao anatin’ny Fiangonana.
Ny Jakoba 4: 8a no nitondrany ny hafatra: “ Manatòna an’Andriamanitra dia hanatona anareo Izy.”
Nambara tamin’izany ary fa rehefa sendra ady sarotra sy aretina na fahoriana isika no mazàna mila vonjy amin’Andriamanitra. Misy koa anefa ireo tia sy miaina amin’ny fitiavan’i Kristy ka tsy matahotra fahoriana. Maro ireo raiamandrenintsika teo aloha no tsy nivadika tamin’ny finoany na dia novonoina aza, satria tsy fiafaran’ny fiainany akory ny fahafatesana, ho an’izay mino an’i Kristy. Isan’izany Rasalama Martiora izay nino an’i Kristy ka rehefa nanatona an’Andriamanitra izy dia tsy hitany akory ny lefona namonoana azy, fa ny lalan-tsara aza no hitany ka nizorany fa hoy izy:”Hitako ny lalan-tsara ka hizorako, azoko ny famonjena ka hotanako”. Aza matahotra na manahy isika fa omen’i Jesoa hery manokana sy fiadanam-po ireo izay tena mino Azy marina ka ataony mahazaka ireny fizahan-toetra sy fakam-panahy ireny . Taomin’ny Tompo mandrakariva hanatona Azy isika. Rehefa vita ny hafatra dia nohiraina ny hira faha 772 and 1:“Manatòna, Manatòna an’i Jesoa izao’.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola natao ny hira faha 205 and. 1, 2: “Ny Teninao rehetra”.
Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’ny Diakona RABENASOLO Rija ary taorian’izany dia novakina misesy ny perikopa izay voalahatra. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Zakaria 9:9-11. Ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Matio 21:1-10 ary ny Apokalypsy 3:7-13. Izy no namaky ny Testamenta Taloha, ny Diakona RABENASOLO Murielle kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny Hira Fifohazana faha 70 and. 1, 2: “Ry Fanahy Masina ao ambony”.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ity alahady ity isika no mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy: “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA” isika. Ny Teny araka ny Matio 21 :1-10 no nanompanany izany fampianarana izany. Ity perikopa ity dia maneho ny fidiran’i Jesoa Kristy amim-boninahitra tao Jerosalema, raha niatrika indrindra ilay herinandro farany izay niainany tety ambonin’ny tany ny Tompo. Ny lohahevitra lehibe azo tsoahina amin’ity perikopa ity dia hoe : “NY ASAN’NY MPINO, MIORINA AO AMIN’NY TOMPO”. Zana-kevitra roa no ndeha havoitra ao anatin’izany : MANOMANA NY FISEHOAN’I JESOA AMIN’NY OLONA NY MPINO (and 1-7) Teo Betifaga no toerana nanomanana ny fidiran’i Jesoa ho ao an-tananan’i Jerosalema. Tsy maintsy nomanina izany ho fahatanterahan’ny faminaniana araka ny Zakaria 9: and 9. Io faminaniana io dia tanteraka eto amin’ity fotoana ity ary mba ho fahatanterahan’izany dia misy asa nampiandraiketin’ny Tompo ny Mpianatra mba hahatontosana izany. Manaiky irahina ny mpianatra. Tsy mihambahamba fa mandray ny baiko ary manatanteraka. Misy ny torolalana omen’ny Tompo entina manatanteraka izay zavatra ho hita sy hatao. Nasaina nandeha teny amin’ny vohitra nanandrify azy izy ireo, nasaina namaha ny fatoran’ny boriky ary nitondra azy teny amin’ny Tompo. Asehon’i Jesoa mialoha ny olana sy ny vahaolana amin’izany asa nampanaovina ny mpianatra izany. Ny boriky no nosafidian’ny Tompo hotaingenana ary izany dia maneho fa tonga hanompo ny Tompo fa tsy hotompoina. Ho fampiharana izany amin’ny fiainantsika dia maro ny baiko omen’ny Tompo antsika. Ny lehibe amin’izany dia ny fanirahana antsika anao ny asa fanompoana. Amin’izany dia mety hirahina isika hamaha ny fatoran’ny olona amin’ny fatotra samihafa na ny fatotry ny fahotana izany.Tsy ny olona ihany no ampiasain’Andriamanitra fa ny fananana ihany koa. Andeha ho tanterahintsika ara-bakiteny tokoa fa misy raharaha analan’ny Tompo antsika ka ho ampiasaintsika ny tenantsika ary ny fananana eo am-pelantanantsika anatanterahina izany. Eto amin’ny (and.7) aza dia azo hambara fa manao mihoatra noho izay hangatahin’ny Tompo ny mpianatra. Nametraka ny lambany teo ambonin’ny boriky izy ireo. Manambara izany fa nametraka an’i Jesoa ho Mpanjaka izy ireo. Ny firaisana amin’i Jesoa dia mampamokatra voa tsara ka mahatonga ny olona hanome mihoatra noho izay angatahan’ny Tompo. Ny Tompo dia tsy mitady zavatra sarotra entina manompo azy fa izay misy eo amintsika ihany no angatahany hanompoana Azy. Na ny fotoana omentsika ho an’ny Tompo ho fanompoana Azy aza dia tena lehibe ho Azy. Ny fanekentsika ny Tompo fa mpanjaka Izy ary be fitiavana dia izay no maharesy lahatra antsika hanatanteraka mihoatra lavitra noho izay tokony ho natao. Tsy avy amintsika anefa izany fa vokatry ny Fanahy izay miasa ao anatintsika dia ny fanaovan-tsoa, ny fitiavana, ny fiadanana , ny fahamoram-panahy. Meteza ary handeha araka ny Fanahy ho famonjena ny hafa. MANEHO NY MAHA MPANJAKA SY MAHA MPAMONJY AN’I JESOA NY MPINO (and. 8-11) Amin’ny fihetsika sy ny teny no nanehoan’ny olona ny maha mpanjaka ny Tompo. Nametraka ny lambany teny an-dalana ny olona ary nisy kosa nametraka rantsan-kazo. Ireny fihetsika ireny dia fanehoana fa tonga ilay Mpanjaka , hamonjy sy hanafaka. Izany dia manambara ihany koa fa nomena ilay mpanjaka izay avy amin’ny tena, mba hoentina manome voninahitra Azy. Ho antsika izay vahoakan’Andriamanitra izay mandray izao hafatra izao dia Mpanjakan’ny fiainantsika i Jesoa Kristy. Hanandratra ny maha mpanjaka Azy isika. Andeha isika haneho ny haja sy ny voninahiny, haneho ny fiankohofana eo amin’Ilay Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka isika anio. Ny fanehoana ny maha mpanjaka an’i Jesoa dia atao amin’ny alalan’ny teny (and. 9-11) Misy lafiny roa ny fanambarana ny teny hoe : “Hosana hosana” izay nataon’ny vahoaka: Ny heviny voalohany dia fitalahoana famonjena noho izay mihatra amin’ny fiainan’ny vahoaka . Teo ambany fanjanahan’ny fitondrana Romana mantsy ireto vahoaka ireto tamin’izany fotoana izany, ka mila mpanafaka sy mpanavotra, ka noheveriny mihitsy fa i Jesoa no hanafaka azy ireo amin’izany. . Ny lafiny faharoa dia maneho fihobiana ilay mpanjaka ny teny hoe : “Hosana , Hosana”. Tsy fantatr’ireto vahoaka izay nihoby an’i Jesoa ireto anefa fa ny fanateran’ny Tompo ny tenany teo amin’ny Hazofijaliana no fahatanterahan’ny famonjena. Niteraka hotakotaka teo an-tanàna ihany koa ny fiakaran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema. Nitovy tamin’ny nitranga tamin’ny fahaterahan’i Kristy ihany izany, raha nambaran’ny magy tamin’i Heroda ny fahaterahan’ilay Mesia. Tsarovy ry havana, fa amin’ny fiavian’i Kristy izay hiverina indray, dia ireo tsy mino sy mandà Azy ho mpamonjy no hihotakotaka, fa ho antsika izay ao amin’i Kristy dia handray ny lova tsara avy amin’ny Tompo isika. Ny tokony atao manoloana ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy dia ny fanehoantsika ny maha mpanjaka sy mpamonjy an’i Jesoa. Izay no fiorenana andrasan’ny Tompo amintsika. Ny mpamonjy antsika dia Ilay mivavaka mandrakariva ho antsika, koa atolory Azy izay manahirana anao. Tano mafy ny finoana anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao, fa ho avy faingana Jesoa Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Isika mpino miorina dia manomana ny fisehoan’i Jesoa amin’ny mpino ary maneho ny maha mpanjaka azy sy mpamonjy Azy isika.
Manoloana ny hafatra izay notorina dia nataon’ny Mpitandrina ny vavaka ho setrin’ny Tenin’Andriamanitra.
Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao miohatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka ny hampahiratana ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.
Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao miohatra noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.
Mivavaka mba hahafahana maneho fa mpanjaka tokoa ny Tompo ary Mpamonjy ka haneho izany isika amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny sy ny asa tanterahina ka hitondra ny anaran’i Kristy ary hitondra fiainana sy zava-tsoa ho an’ny olona .
Aoka ny momba antsika rehetra ho fitaovana hanandratra ny Tompo ho Mpanjaka, ilay Jesoa velona, mipetraka eo ankavanan’ny Ray mangataka mandrakariva ho antsika. Tompon’ny fiainantsika Izy. Asehon’ny Tompo amin’ny fiainantsika anie fa Izy tokoa Ilay miahy sy mpamonjy antsika.
Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana . Ny fanekem-pinoana Apostolika no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.
VAVAKA SETRY NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Manoloana ny hafatra izay notorina dia nataon’ny Mpitandrina ny vavaka ho setry ny Tenin’Andriamanitra.
Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao mihoatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka ny hampahiratana ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.
Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao mihoatra noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.
Tamin’izany vavaka izany no nanambarana fa na dia mandalo fizahan-toetra aza ny Fiangonana dia mbola faly sy ravo fa afaka mivavaka, nomen’Andriamanitra hery sy fanantenana ary tsy levona ny finoana.
Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana. Ao ireo mbola ao anatin’ny aretina.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany.
Nangataka tamin’ny Tompo ny hanasitranana amin’ny aretina rehetra fa indrindra ny amin’ny “covid-19” fa ny dian-kapoka tamin’i Kristy no nahasitranana anay rehetra.
Nivavaka ho an’izay manana olana hafa sy ny marary. Nivavaka ho an’ny mpitsabo sy ny fanafody hoenti-mitsabo mba hahomby.
Nivavaka ho an’ny fianakavian’ny marary.
Nivavaka ho an’ny Fiangonana mba tsy hiraviravy tànana fa hiantoraka amin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny asa fivelomana , ny fikarakarana ny ankohonana.
Nivavaka ho an’ny havana sy ny namana ary ankohonana.
Nivavaka ho an’ny asan’ny Fiangonana, ny asan’ny sampana ary ny vaomiera samihafa.
Nivavaka ho an’ny foibe FJKM, ny Synoda lehibe.
Nivavaka ho an’ny Asa fifandraisana FJKM.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina rehetra, ny evanjelistra sy ny mpiasa rehetra eny an-tanimbolin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny Firenena eo ambany famindram-pon’Andriamanitra.
Izany vavaka izany dia natao amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Ny hira FFPM 460: “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” no notanterahina mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2021 .
Ny hira FFPM 731 and 1: “Enga anie ka homba anao Jesoa” no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .
Nandray an-tsoratra: RABAKO Tovohery
Ny niandraikitra ny feo sy sary : HARENTSOA Rova
Alahady faha-dimy amin’ny Karemy
Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF)
“Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …” Jaona 15: 16a
“MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”
Alahady fahadimy amin’ny Karemy ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe: « Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra ».
Ary koa alahadin’ny Sampan’Asa momba ny Fampandrosoana (SAF) eto anivon’ny FJKM.
Fotoana miavaka ihany koa noho ny ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF), koa ireo mpikambana ao amin’ny Sampana no nanatanteraka ny fotoam-pivavahana. Amin’ny maha fankalazana ny faha 30 taonan’ny Sampana dia nisalotra fanamiana vaovao izy ireo. RANDRIAMASIMANANA Hanta no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.
Taorian’ny feon-javamaneno teo am-pidirana, dia nanao anjara hira ny Sampana Taninketsa (STAF). Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia namaky ny Salamo 11: 1-7, teo am-pitsanganana ny Fiangonana, ho fiderana an’Andriamanitra.
Natao ny hira FFPM 16: 1 – 2 « Avia ry vazantany o! » taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika.
Nisaotra sy nidera an’Andriamanitra izy noho izao fotoana izao. Nisaotra noho ny nanomezany an’i Jesoa Kristy. Nisaotra koa fa tojo izao fotoana ho an’ny Sampana izao. Na misedra andro sarotra aza dia eo Jesoa. Mpanota tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra ka mifona. Mangataka ny fanatrehan’Andriamanitra feno.
Zoky Lanto, mpampianatra ao amin’ny K2, no nanatanteraka izany. Nasainy nitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ireo rehetra ao amin’ny Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 772: 1, 5 « Manatòna, manatona » ary nivavaka, nisaotra an’Andriamanitra.
Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny nitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Salamo 107: 6 “Dia nitaraina tamin’ i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin’ ny fahatereny;”
Mahavariana, hoy izy, fa misy olona eo amin’ny fiainany dia tsy mba manana manahirana. Kamboty ray sy reny i Mahefa. Mahatsapa banga na teo daholo aza ny fitaovana ilainy rehetra. Sendra nahare toriteny izy ka nitaraina tamin’Andriamanitra. Nanaitra an’i Mahefa izany, fa misy vahaolana hay ny fiainana. Afaka mamonjy Andriamanitra na tsy hitan’ny masontsika aza.
Hafatra: Aza misalasala mitaraina amin’Andriamanitra.
Nofaranany tamin’ny vavaka ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, nisaotra ny Tompo Jesoa, misaotra fa tia manokana Izy. Nangataka famonjena ho an’ireo namana tsy mbola mahalala an’Andriamanitra.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 210: 1 « Zava-tsoa tokoa » (Feony zafindraony), mialoha ny vakiteny.
RANDRIAMASIMANANA Antenaina no nivavaka ka nanohy avy hatrany tamin’ny famakiana ny Testamenta Taloha ; ny Testamenta Vaovao dia nifandimbiasan-dRABIAZAMAHOLY Haga sy RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Taninketsa avokoa ireo tompon’anjara ireo.
Ny perikopa voalahatra dia ny Jeremia 20: 11-13; Lioka 8: 11-15; I Petera 1: 3-9.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 183: 2 “Ka raha re ny Teninao …” mialoha ny toriteny.
Toriteny niompana tamin’ny Perikopa no nataon’ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra.
Mbola ao anatin’ny fandinihana ny “Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra”. Midika izany hoe ny mpino dia miorina noho ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia zavatra sarotra hampandalovin’Andriamanitra ny olona, toa an’i Joba. Ny vokatry ny fizahan-toetra dia fiorenana
Nalaina natao ohatra ny ovy sy atody. Samy hafa ireo akora ireo. Ny ovy mafy rehefa manta ary lasa malemy rehefa masaka, ny atody kosa malemy ny ao anatiny ary lasa mafy rehefa andrahoana. Toy izany ny miorina, manana hery enti-manohitra.
Maharesy fakam-panahy ny mpino miorina (Lioka 8)
Mifanatrika amin’ny Tenin’Andriamanitra (Voa nafafy). Nomena ny Tenin’Andriamanitra ny olona rehetra satria tiany ho tonga amin’ny famonjena.
Misy karazany efatra ireo namafazana ny Teny (voa), hita ao amin’ny and.14: ireo mandre ny Teny nefa mora voarebirebin’ny devoly ; ireo mandray fa tsy maharitra; ireo voageja ka tsy mahavanona ny Tenin’Andriamanitra. Isika tsy ao amin’ireo sokajy telo ireo fa isika no maharesy, ao amin’ny and 15: voa nafafy teny amin’ny tany tsara. Mandre ny Teny amin’ny fo sady tsara no marina, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. Tsy ny fo rehetra no hitoeran’ny Teny fa ny fo nihaona tamin’ny Tompo.
Ahoana ny fontsika ankehitriny?
Ny Tenin’Andriamanitra raisinao dia tokony hitondra vokatsoa eo amin’ny fiainanao.
Ny olona maharesy fakam-panahy dia mahatahiry ny Tenin’Andriamanitra.
Miaina amin’ny fanantenana ny mpino miorina (1 Petera 1)
Ny fanantenana eto dia miorina amin’ny zavatra roa:
And.4: ny fisian’ny lova miandry
And. 6: ny fizahan-toetra.
Ny finoana an’i Jesoa Kristy no fiainana izany.
Misedra fahoriana isika ankehitriny, fampahoriana koa ataon’ny hafa. Mila ho kivy isika.
Mitaona antsika ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa miaina amin’ny fanantenana dia feno hafaliana. Misy fiantraikany any amin’ny tsy mpino izany, hijoroana vavolombelona.
Manana fiainam-piderana ny mpino miorina (Jeremia 20)
And.13 “Mihirà ho an’ i Jehovah, miderà an’ i Jehovah; Fa Izy namonjy ny fanahin’ ny malahelo tamin’ ny tanan’ ny mpanao ratsy.” Mahagaga ny fisian’ny fiderana eto nefa tao anatin’ny fampijaliana izy. Ren’Andriamanitra anefa ny fitarainana ka niditra an-tsehatra Izy. Ny antom-piderana? Momba antsika ny Tompo (and. 11); Mahafantatra ny fahavalo ny Tompo (and. 10)
Manana fifaliana fa mino sy matoky fa hamonjy Andriamanitra. Na misedra ny mafy aza dia aza hatsahatra ny fiderana sy ny fisaorana an’Andriamanitra. Mankalaza amin’ny Teny, amin’ny hira fiderana, amin’ny fanaovana ny asa. Raha marary dia miderà, raha sahiran-tsaina dia miderà … Ny Taninketsa dia modely ho an’ny fianakaviana, ho an’ny mpiara mianatra … mitaona ny olona ho amin’ny fiderana noho ny fahaizana mihira.
Tsy hatsahatra ny fiderana fa miasa Andriamanitra hampandresy antsika mandrakariva. Reseo ny fakam-panahy, hamafiso ny fanantenana, miderà ny Tompo … Jaona 15: 16 “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …” Teny fanevan’ny Taninketsa nandritra ny 30 taona izany.
Nofidiana ianareo, natokana: misy fanamasinana izany. Miady amin’ny fakam-panahy nefa ampaherezin’ny Tompo. Tondrozotra amin’izao taom-pankalazana izao io, fiderana an’Andriamanitra mandra-pahatonga ao amin’ilay lova mandrakizay.
Misaotra an’Andriamanitra noho ny fanambarany ny sitrapony nefa tsy nahatanteraka izany isika koa manetry tena mifona. Ny finoanay anie hiorina Aminao tokoa hanananay fanantenana ao anatin’ny fakam-panahy sy fizahan-toetra. Natao ny hira FF20: 1 “Jesoa Fitiavana”.
“Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho” (Isaia 44: 22)
Feon-javamaneno fohy mialoha ny tatitr’asan’ny Sampana Taninketsa. RAZAFIMITSOA Malalatiana no nanatanteraka izany. Jaona 15: 16a “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …”.
Tatitr’asa septambra 2020 hatramin’ny martsa 2021. Vita ny tatitra dia nanao ny anjara hiran’ny Sampana. Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 539: 1 sy 4: “Faly dia faly”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faha 3.
RAKOTOMANANA Andry, Sekretera Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana. « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b).
-Avy any ivelany
Fanasana FJKM Andrainarivo: antsan-kira. Paroisse internationale: 28 martsa: fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy
Fiomanana amin’ny fankalazana ny Paska. Mitohy ny fanompoam-pivavahana isaka ny zoma hariva. Ankatoky ny Fandraisana: alahady 28 martsa 2021 aorian’ny fanompoam-pivavahana fidirana voalahany. Fanompoam-pivavahana ho an’ny Zokiolona: alahady faha 3. Miditra in-droa hatrany ny fanompoam-pivavahana isaka ny alahady: amin’ny 7ora sy amin’ny 10ora. Voafetra ho 200 ny isan’ny mpiangona.
Fotoana 5 minitra Fahasalamana
RAZAFINDRABE John Bam, Biraom-piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Soratra Masina noraisiny dia ny Ohabolana 4: 1-2 izay mivaky toy izao: « Ry zanaka, henoy ny anatry ny Ray, ary tandremo, mba hahazoanareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo; Aza mahafoy ny lalàko. »
Nanome fampahalalana momba ny zava misy ankehitriny: miova ny “Coronavirus”, tonga ny “variant sud africain”. Momba ny “Covid” amin’ny ankapobeny: ny olondehibe no tena azon’ny “Coronavirus”. Ny fiantraikany amin’ny tsirairay, ny fahasitranana, ny fifindran’ny aretina dia mandra-pahasitrana. Ilaina fantatra sy hitandremana: Izay efa voan’ny “Coronavirus”dia mety mbola hiverenany. Nandray fitenenana ny Mpitandrina miza-draharaha : niarahaba manokana ny STAF tojo amin’izao fotoana izao. Mampahery hamokatra ho an’ny Tompo. Manentana amin’ny fanarahana ny fepetra fiarovana amin’ny valanaretina. Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitandrina mianakavy. Amin’ny 9ora alina, isan’andro, samy manandram-bavaka fiadiana amin’izao aretina izao, ho an’ny marary…
Ny hira FF 10 no nohiraina teo am-panantazana ny rakitra. Ny hira FFPM 432:2: “Mandra-piavin’ny Tompo, miasà!” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Nitohy ny feon-kira mandritra ny fanolorana ny fanantazan-drakitra ary nihira ny Sampana Tanora Kristiana (STK) mialoha ny vavaka fangatahana.
Misaotra ny Tompo fa afaka miantoraka, manolotra rakitra fanavaozana ny fanoloran-tena.
Mivavaka ho an’ny hetsika atao amin’ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, ny faha 20 sy 30 taonan’ny Sampana, hiteraka fahazotoana sy fifaliana ; mivavaka ho an’ny FJKM sy ny rafitra ao aminy, ny fiomanana amin’ny Synoda lehibe, ny SAF FJKM.
Manoloana ny “Coronavirus”, mivavaka amin’Andriamanitra hijery ireo marary, ireo mpitsabo sy mpikarakara, ny vahoaka malagasy manontolo, ireo mpitondra. Mangataka mba hitodika marina amin’Andriamanitra ny Malagasy.
Mangataka fampaherezana, aro sy fitantanana ny mpianakavin’ny finoana, mpitondra tena kamboty. Ao Aminao Tompo no misy ny fahasoavana rehetra koa jereo ireo azom-pahoriana , kivy, hiatrika zava-tsarotra …
Mivavaka ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina sy ny rafitra rehetra. Ho famonjena ho an’ny olona rehetra anie ity Fiangonana ity. Vavaka mangina ho an’ny tsirairay ary nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra”
Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 12: 1 “Am-pelatananao ry Raiko” ary novakina ny tondrozotra 2021.
Natolotra ny tsodrano. Nohiraina ny hira FF12: 2 “Am-pelatananao ry Raiko”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina. Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.
Nikirakira ny fanamafisam-peo: RAKOTOVOLOLONA Lova
Publié le 14 mars 2021 4 avril 2021
Alahady 14 Martsa 2020
Alahady faha-efatra amin’ny Karemy
Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra « Mampiorina ny mino ny filazantsara ».
RABENASOLO Muriel no nitarika ny fotoana.
JOHARIVELO Fanambinana Misionera any amin’ny Kaominina Bevoay kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny Salamo 146 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra
Rehefa voavaky ny Salamo dia noventesina ny FFPM 438,1-3
Nisaorana ny Tompo noho ny famindram-pony sy ny fotoana nahafahana nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Nangatahina ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana.
Ny mpampianatra sekoly alahady RAMINO Lalaina no nitarika izany. Ny Salamo 34,1a no nangalana ny hafatra “Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; Ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy”
Ny anatra azo noraisina tamin’izany dia ny tokony isaorana an’Andriamanitra na inona na inona mitranga. Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 488,1.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nisaorana ny Tompo noho ny fampahatsiahivany antsika fa ilaina ny fahaizana misaotra ary noho ny fitiavany antsika sy ny tsy fanadinoany antsika. Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 439, 1 – 2 ary Nanao ny vavaka mialohan’ny vakiteny ny diakona RAJOHARISON Hanta Oliva nisaotra ny Tompo noho ny fahafahana mandray ny teninyindray ary ihany koa noho ireo zavatra rehetra nitranga tamin’ny fiainana.
Nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny saina sy ny fo ahafahan’ny tenin’Andriamanitra mitoetra aty anatintsika. Izy nivavaka ihany no namaky ny Deoteronomia 8,1-14 ary ny diakona Do Van Francky no namaky ny Lioka 22,24-32 sy ny II Korintiana 7,7-15 . Nofaranana tamin’ny hira FFPM 534,1-3 izany.
Ny Deoteronomia 8,2-6 no nangalan’ny Mpitandrina Misionera avy any Bevoay JOHARIVELO Fanambinana ny toriteny. Ny olombelona dia mandala fizahan-toetra sy fakam-panahy. Ny fizahan-toetra dia avy amin’Andriamanitra nentiny anamafy orina ny olony? Ny fakam-panahy kosa dia avy amin’I Satana izay ampiasainy anozongozonana ny finoana. Ny andalan-tSoratra Masina izay toriana amintsika anio dia manambara fa manoloana ny fanadinoantsika ny sitrapon’Andriamanitra dia ampatsiahiviny antsika amin’ny alalan’ny Teniny izany. Mitaona antsika mba hanetry ten any Tompo ahafahan’ny vononahiny hiseho amintsika.
Farany dia anarin’Andriamanitra tahaka ny fananaran’ny olona ny zanany isika.
Talohan’ny nametrahan’Andriamanitra ny zanak’Israely tao Kanana dia nozahana toetra nandritry ny efapolo taona tany an’efitra ny zanak’Israely mba ahafahany mahatsapa ny haben’ny voninahitr’i Jehovah sy anefeny ny toetry ny zanany.
Rehefa hitsena ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra isika dia toe-po sy toe-tsaina manao ahoana no itsenantsika Azy. Manoloana ny fitsapana mahazo antsikadia mila mandini-tena isika Kristiana indrindra amin’izao Karemy izao.
Ny olona miova fo rehetra dia ampandalovin’Andriamanitra fizahan-toetra avokoa ahafahany mandeha arak any Fanahy. Jesoa ilay tsy manana ota no airery ihany no afaka mamonjy antsika.
“Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, …” Jaona 17,3
“Satria raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao hianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena hianao. Fa amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin’ny vava noanekena hahazoana famonjena.”
Andriamanitra dia maniry ny itomboantsika amin’ny fahalalana Azy syn y anarahantsika azy ary ny anavaozantsika ny fanolorantenantsika sy anatanterahantsika ny sitrapony.
Katsao ny fanjakany sy ny fanjakany, meteza ho mpinompankatoa ahafahanao mahazo ny satro-boninahitra.
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana sy ny hira fifonana FFPM 312, 1-5.
Jaona 5,24 “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho helohina; fa tafafindra niala tamin’nyfiainana izy”
Efesiana 2,8 “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra.”
Natao ny hira FFPM 543,1 mialoha ny famakiana ny fanekem-pinoana laharana faharoa.
Ny diakona RAKOTOMANANA Andriambazotiana biraon’ny fiangonana no nanatontosa izany androany. Manomboka Ny Alatsinainy 15 Martsa izao ny erinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa
Ny talata 15 Martsa no fivorian’ny Dorkasy
Alarobia 16 Martsa Fampianarana Soratra Masina
Zoma 6ora sy sasany ariva fotoam-bavaka iarahana amin’ny Taninketsa
Sabotsy 20 Martsa famangian’ny Taninketsa nyAkany Fialofana Tangaina
Ny 20 Martsa izao no fivoriamben’ny SLK syn y Sampana Mpiangaly Zava-maneno
Ho fankalazana ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena dia hisy ny randonnée ho karakarain’ny fiangonana any Ambohitrandriamanitra ny 27 Martsa ko any fara fisoratana anarana dia ny Alahady 21 Martsa izao.
Hisy ihany ko any fifaninanana Cover.
Avy izany dia nanao fanentanana ny filohan’ny K160 i RAMANANARIVO Andry:
Nanamafy ny ahavitrian’ny mpianakavin’ny finoana handray anjara amin’ilay Randonnée ny tompon’Andraikitra
Nazavaina ihany ko any mahakasika ny fifaninanana Cover, ho hita ao amin’ny pejy facebook “Fankalazana ny faha-160 taona – FJKM AMPARIBE FAMONJENA” ny andinindininy mahakasika izany.
RAZAFINDRAVELONA Nirina no nanatontosa izany androany. Namafisina tamin’ny mpianakavin’ny finoana ny fihetsika fisorohabna ny Covid-19
Nampatsiahivina ny fomba fifindran’ny aretina, indrindra fa ny fisorohana izany toy ny elanelana iray metratran ny fanasana tanana matetika, ny fijanonana an-trano raha nifanerasera tamin’ny olona mitondra ny tsimok’aretina, mila mijanona an-trano ihany koa raha toa ka mitondra ireo soritr’aretina,…
Namafisin’ny mpitandrina ny fihetsika fisorohana ny Covid-19
Namporisika ny mpianakavin’ny finoana handray anjara amin’nireo etsika fankalazana ny faha-160 taonan’ny FJKM Amparibe famonjena ny Mpitandrina
Nampahafantatra sy nanentana ny mpianakavin’ny finoana mpandray ny fanasan’ny Tompo ihany ko any Mpitandrina mba hanaraka ny fiofanana Filière Théologique pour le Laïcsna FITELA.
Natao ny hira fanampiny 48 nandritra ny fanatazana ny rakitra ary ny FFPM 434,4 nandritra ny fanolorana ny fanati-pisaorana.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampiorenany ny zanany amin’ny fizahan-toetra
Nisaorana ihany ko any Tompo noho ny fampianarany antsika mba hanetry tena syn y fampahatsiahivany antsika ny sitrapony.
ireo tompon’Andraikitra mpanatontosa ny asan’Andriamanitra;
ireo Kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjnena;
Ny zanaka am-pielezana;
Ny Misionera JOHARIVELO Fanambinana sy ny ankohonany;
Ireo manolo-tena hanaraka ny fiofanana FITELA;
Ny Komity syn y hetsika rehetra tontosain’ny fiangonana;
Ny Synoda lehibe ho tontosain’ny fiangonana any Sambava;
Ny avana any atsimo ianjadian’ny mosary;
Ny famongorana ny valan’aretina Covid-19
Ireo rehetra tratry ny tsy fahasalamana;
Ho famaranana izany vavaka izany dia natao ny vavaka nampianarin’ny Tompo
Natao ny hira FFPM 579, 1-2
mialoha ny nanambarana ny Tondrozotra 2021 ary rehefa izany dia natolon’ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira FFPM 579, 4 sy vavaka mangina ny fotoana.
Mpitendry : RAJAOFETRA John
Niandraikitra ny fafana : RAZAFIMAHARO Kanto
Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa
Naka sary : RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina
Publié le 7 mars 2021 4 avril 2021
Alahady 07 Martsa 2021
« Miorena tsara, aza miova » I KORINTIANA 15 : 58
Alahady fahatelo amin’ny Karemy anio, niavaka koa satria Alahady Fandraisana sy nanokanana Diakona vaovao roa. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny litorjia sy nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana. Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.
Nisy feon-javamaneno sy teny fampidirana ary fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny SALAMO 66: 8-12 hoe: “Misaora an’ Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra ô, efa nanadio anay Ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy. Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao “. Noredonina ny hira FFPM 233: 1,2 “O! Ray Malala asehoy “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.
Ny mpampianatra HARENTSOA Louisa ao amin’ny K8 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina dia ao amin’ny SAL.143 : 10a hoe : « Ampianaro hanao ny sitraponao aho ; fa Ianao no Andriamanitro », izay vavaka nataon’i Davida, mpanjaka lehibe eto amin’ny firenen’ Israely. Nasaina novakina intelo izany, izay no nitaomana ny Fiangonana hiainany ny Tenin’ny Tompo, na amin’ny fifaliana na amin’ny fahoriana. Ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady, ny ankizy sy tanora dia nasaina nitsangana : nisy vavaka, naverina novakina ilay Teny. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 307 : 1,5 « Iza no hanompo an’i Jesoa soa? ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRASOLONJANAHARY Fidy, novakiny ny GEN. 22 : 11-20 raha RANDRIAMASIMANANA Hanta no nanohy izany araka ny ao amin’ny JAO. 6 1-13 sy HEB. 11 : 17-19, samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ireo. Natao ny hira FFPM 312 :1,3,4 :« Mitoera, ry Jesosy» mialoha ny toriteny.
Ny perikopa voavaky rehetra no nakana ny hafatra androany.
Ny fizahan-toetra dia manana hevitra hafa: ny fakam-panahy izay ataon’ny devoly. Fa rehefa Andriamanitra no mametraka fizahana dia izay no ampiasana ny teny hoe mizaha toetra ny Tompo. Asan’ Andriamanitra ny mametraka izay tokony hiorenan’ny olona amin’ny finoana. Andriamanitra dia efa mahalala ny zavatra ataontsika fa isika no tiany hahalala raha miorina rehefa misy fizahan-toetra, fitsapana ny tanjaky ny finoan’ny kristiana, fizahana ny fatran’ny fahatokisany an’ Andriamanitra.
Ny fitsapana ny tanjaky ny finoana
Zanaka lahitokan’ i Abrahama no nangatahin’ Andriamanitra natao fanatitra nefa efa sahirana izy vao nahazo zaza. Sarotra ny manavaka raha tena avy amin’ Andriamanitra izany fitsapana izany noho ny fisian’ny andriamani-tsy izy tao. Nizahan’ Andriamanitra toetra i Abrahama sady nalain’ny devoly fanahy ihany koa. Ny anjelin’i Jehovah niresaka taminy. Ny zavatra hita tao amin’ny tantara araka ny HEB. and. 19 dia: Andriamanitra mahay manangana ny maty, manatanteraka ny zavatra rehetra. Izay no noraisin’i Abrahama ao amin’ny GEN. 22: 14 anehoany ny finoany fa “Jehovah no hahita ”, mahita izay ataony, ny fanatiny, ny ao am-pony. Izay no nahazoany ny Teny fikasana sy nahatonga azy nomena anarana hoe “Rain’ny mino ”. Fizahan-toetra ny fo no resahina eto. Lehibe, mafy, masina sy tsara ny finoan’i Abrahama araka izany.
Fizahan-toetra ny fatran’ny fahatokisana an’ Andriamanitra
Ao amin’ny JAO. toko faharoa ka hatramin’ny fahadimy no ahitana ireo famantarana nataon’i Jesoa nahatonga ny olona nanaraka sy nitady Azy. Teo Izy no nizaha toetra ny mpianany nanomboka tany Galilia. I Filipo dia anisan’ny mpianatra nametrahana ny fanontaniana raha tena mitoetra tsara, raha mahavita zavatra tokoa ny Tompo. Fizahan-toetra ny saina no eto. Hita fa kely finoana ny olona.
Ampy, betsaka, mafy orina, mafonja, misy lanjany, mitoetra tsara, maharitra ve ny fahatokisanao ny Tompo?
Mitoetra amintsika rehetra na ny fitsapana ny fatran’ny finoana na ny fizahana ny fatran’ny fahatokisantsika Azy amin’izay andraikitsika. Fandinihantena no ilaina amin’izao fotoan’ny Karemy izao. Aoka isika hamantatra ny momba ny tenantsika raha zavatra tiantsika no hizahana toetra antsika.
Hisy Diakona hotokanana fa ny hafatra dia miantefa amin’ny FDL amperinasa. Nahavita fiofanana izy ireo, amin’izao 2 taona farany izao vao hanao ny asa amin’ny maha Diakona izy ireo, fa ny 2 taona voalohany no fitsapana. Jehovah jerena, Izy no hahita satria nahalala izay tao anatiny. Miantoka ny antson’ Andriamanitra isika. Mandalo isan’andro amin’ny fiainan’ny Diakona koa ny fizahan-toetra. Manao ahoana ianao ao anatin’ny asa efa nekenao hotanterahina teo anatrehan’ Andriamanitra sy ny Fiangonana? Iza no tianao hatao laharampahamehana? Ianao no mamaly izany fa aza mijery olona. Isika kristiana koa izahan-toetra amin’ny zavatra sy endrika samihafa. Tsarovy fa mampiorina anao tokoa ny fizahan-toetra mba handrosoan’ny Fiangonana misy anao.
Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Novakiny ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR. 17: 3b nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :
Sabotsy 13 martsa 2021 maraina : fiofanan’ny Biraon’ny rafitra rehetra ;
Misy fianarana Sekoly Alahady rehefa Fandraisana voalohan’ny volana ;
Sabotsy 27 martsa 2021 dia an-tongotra (« randonnée ») karakarain’ny K160 eny Ambohitrandriamanitra Ambohijanaka (6 km na 9 km mandritra ny adin’ny 2), miainga eto am-piangonana amin’ny 7 ora maraina, misoratra anarana mialoha eny amin’ny tompon’andraikitra hatramin’ny 21 martsa 2021. Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara na mandeha fiara iombonana na mandeha fiara manokana ;
Fandaminana vaovao manoloana ny fiatrehana ny valanaretina : azo atao ny mitondra razana aty am-piangonana rehefa tsy COVID no nahafaty azy, ferana ho 100 no isan’ny afaka manatrika fotoam-bavaka, ny famangiana any an-tokantrano kosa dia miato.
Nitohy tamin’ny 5 minitra fahasalamana ny fotoana.
5 MINITRA FAHASALAMANA
Ny mpitsabo RAMAHOLISON Jules no nanatontosa izany androany. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny III JAO. 1: 2 no fototra niorenan’izany fizarana izany, manao hoe: “ Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin’ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany “. “ Ny fahasalamana no voalohan-karena” hoy ny Ntaolo, izay no anaovantsika ezaka mba hahafahana maka ny fepetra rehetra tokony horaisina. Fampahafantarana miisa 10 no natao momba ny toetoetra sy faharetan’ny valanaretina amin’izay zavatra ampiasaintsika isan’andro (baoritra, plastika, volo, …). Matahotra hafanana io “ virus ” io ka aza atao ambanin-javatra ny fanaovana evoka amin’ny kininim-potsy na ravintsara : ny entona no mamono ny soritraretina.
Manaova fanatanjahantena izay mifanaraka amin’ny toe-batanao. Ny fiarovantena sy ny fitsaboana dia mila entina amim-bavaka satria i Jesoa Kristy irery no tena mpitsabo. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina. Fanentanana no nataony momba ny:
fiofanan’ny Birao amin’ny sabotsy izao. Izay tsy ho afaka dia mba mandefa taratasy fialan-tsiny any amin’ny Biraom-Piangonana ;
fanarahana fiofanana FITELA ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga, olona manana mari-pahaizana Lisansa no afaka manaraka izany ;
fitondrana amim-bavaka ny hetsika rehetra kasaina hatao mandritra ity taona 2021 ity ;
fampianarana Soratra Masina famaranana ny ao amin’ny Jaona izay mitohy sy halefa ao amin’ny “ Facebook ”.
FANKALAZANA TSINGERINTAONA FEBROARY 2021
Natsangana ireo teraka febroary, noarahabaina sy nirariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia hoe: “Anaka, mihainoa, ka raiso ny teniko; dia hihamaro ny taona hiainanao “OHA. 4: 10. Nisy vavaka. Nanao fanatitra teo amin’ny alitara izy ireo. Ny hira FFPM 627: 3,4 “ Vimbino tsara izahay ” no natao nandritra izany. Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.
RALAINDIMBY Tsilavo Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny ISA. 61: 10a. Nandritra ny fanantazana ny fanatitra no nanaovan’ny RFF ny hira: “Ny voninahitra” izay nisy nangataka. Ny hira hafa nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana dia FFPM 338 “Arovy aho Tompo “. Ny olona nanao raki-pisaorana dia: renim-pianakaviana nahazo valim-bavaka; fianakaviana nahazo fahasoavana; renim-pianakaviana sy tovovavy nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany; nahita asa; mangata-bavaka ho an’ny tebiteby amin’ny tsy fandrosoan’ny asa sy fanaovana trano.
Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FF 53: 1 « Havaoziko ilay voady» ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.
Niroso teo amin’ny alitara ireo hotokanana ho Diakona, dia DO-VAN-KHAC Ranarison Tsilavina Francky sy RABEZANDRINA Solohery Nirina. Nomena azy ireo ny Teny fanorenana avy ao amin’ny Soratra Masina narahina hafatra fohy. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanekeny. Nametrahan-tanana tsirairay izy ireo teo am-pandohalehana. Nisy vavaka. Nomena tsodrano izy ireo hahafahany manao ny asany. Rehefa izay dia nataon’ny Firaisan’ny Loholona sy ny Diakona (FDL) ny hira « Andeha ho irakao » (RABAKO RALAMBONIRINA Jean-Jacques). Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Notononina ny toby fitaizana zaza kamboty ; ireo Diakona vao notokanana ; ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana sy ny zanaka am-pielezana ; ny fiofanan’ny Biraon’ny rafitra amin’ny sabotsy ; izay mianatra sy hianatra ao amin’ny FITELA ; ny komity sy hetsika rehetra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ireo sampana manao fankalazana ; ny Synoda Lehiben’ny FJKM ; ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 25 taonan’ny SPAA 10 (Synodamparitany Antananarivo Andrefana); ireo tratran’ny kere any Atsimo ; ny Malagasy amin’ny fiatrehana ny COVID 19 mba hisorohana izany ; ny olona manana fahasahiranana, ny tsy salama, ny azon’ny tsy fidiny, ny manana hataka manokana ; ireo nanao raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.
Notohizana avy hatrany ny fotoana tamin’ny Fandraisana. Nohiraina ny FFPM 623 : 1,4 « Mba omeo ahy ». Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 262 : 1 « Indreto izahay ry Jesoa ô !». Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 383 : 1 « O, ry mpanota, aza mandà » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetren-tena. Natolotra ny Diakona ny mofo sy ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana ny hira FFPM 115 « Jesoa Tompo lehibe », ny FFPM 90 : 1,2« Tsy haiko ny milaza re » no natao nandritra ny nizaran’ny Mpitandrina ny Fanasana taimn’ny Diakona. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra ; nandritra izany no nanatanterahan’ny STK ny anjara hirany. Nisy feon-javamaneno.
Niditra nandray ny toerany ny Diakona. Ny hafatra nomena dia ao amin’ny DEO. 8 : 5 dia hoe : « Koa aoka ho fantatrao amin’ny fonao, fa tahaka ny fananaran’ny olona ny zanany no fananaran’i Jehovah Andriamanitrao anao ». Nohiraina ny « Antema 16 « Isaoranay Jehonah Tomponay ». Novakiana ny tondrozotra 2021, natolotra ny tsodrano; « Mialoka Aminao » no nokaloina taorian’izay. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinité masina dia nirava ny Fiangonana tamin’ny 12 ora sy 45 minitra tao anaty feon-javamaneno.
Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy ny SMZM (notarihin-dRAKOTONARIVO Vatsy)
Niandraikitra ny fafana : RABAKO Tovohery
Alahady faharoa amin’ny Karemy eto amin’ny Fitandremana Amparibe izay notarihin’i Raymonde Perle, Mpitandrina mizaha-draharaha, no tanterina ato anatin’ny fanompoam-pivavahana notontosaina tamin’ny 10ora.
RAKOTOVOLOLONA Malalatiana, Diakona, no nitari-bavaka sy namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta taloha ary RAKOTOVOLOLONA Lova, Diakona, no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Fanekena vaovao sy ny Epistily. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena, no nitondra ny hafatry ny Tompo izay hita ao amin’ny 2Tantara 12:1-8. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 18:1-6:30 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana.
Ny hira FFPM 164 « Jesosy irery ihany» no noredonina. Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
RAFIDISON Hanitra, Mpampianatra K6, no nanao ny hafatra fohy sy fampianarana ho an’ny ankizy sy ny tanora, izay mampiseho ny fijoroana ho vavolombelona fa tena mampiorina tokoa ny Tenin’Andriamanitra ho an’izay mino izany.
Tantaran’Ingahibe iray izay sahirana ara-pivelomana, tsy dia manana tahirim-bola maharitra, ny vady marary sy osa, na izany aza anefa dia hitan’ny fiarahamonina fa dia ao anatiny fitsikina foana Ingahibe. Tao anatin’izany fisehoan-javatra izany no nisy raim-pianakaviana mpifanolo-bodirindrina nanontany an’Ingahibe hoe:
– Fa inona foana no tena maha velom-bolo anao lalandava, ohatra ny mahatsiaro sambatra ery ianao ary inona no mahatonga anao hitsiky lalandava.
Namaly izany Ingahibe hoe:
– Efa taona maro ihany izay no nanolorako ny foko ho an’i Jesoa Kristy.
– Nanomboka teo ve dia tsy mba semban-drahona mihitsy ny fiainanao?
– Semban-drahona tokoa noho ny fahasahiranana.
Nanao ahoana re raha izaho sy ianao no tahaka an’Ingahibe?
Niarahan’ny fianakaviambe novakina teo am-pitsanganana avy eo ny Soratra Masina tsara ho raisina rehefa sendra ny mandalo fitsapana isika, dia ny Jakoba 1:2 “Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana”. Ary nampahatsiahiviny ny hoe: “mihira sy mitsiky ny Tily raha sendra ny sarotra”.
Nohiraina avy eo ny hira 430: 4 « Misy ve ny mampanahy? »
Mialoha ny namakiana ny Soratra Masina, nohiraina ny hira FFPM 358:1 « He! Ry namako mahantra ». Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny Testamenta taloha: 2Tantara 12:1-8 RAKOTOVOLOLONA Malalatiana, ary notohizan-dRAKOTOVOLOLONA Lova kosa tamin’ny famakiana ny fanekena vaovao: Jaona 8:1-8 ary ny Epistily, Hebreo 13:7-16.
Teo am-pitsanganana no noredonin’ny Fiangonana ny hira FFPM 483:2 “Ny finoako Anao”, dia niroso tamin’ny toriteny izay notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny 2Tantara 12:1-8. Ny hafatra sy ny fampianarana nampitaina :
Aseho amintsika fa raha tsy miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra ny olona dia ahoana?
Rehefa mivadika amin’Andriamanitra dia faiziny (And.5). Rehefa tsy miorina, dia hafoin’Andriamanitra ihany koa. Ny zavatra mitranga dia kapohin’Andriamanitra izay tsy mahalala Azy ary avelany hijaly ihany koa isika. Rehefa mivadika amin’Andriamanitra dia kapohiny ary rava sy potika izay heverina sy rehetra nianteherana (And.6).
Indraindray isika dia mihevitra fa rehefa miadana sy finaritra dia variana fa tsy mitodika amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Jaona 8:25-30: dia misarika antsika hiaiky ny heloka sy ny zavatra izay manjo. Ankehitriny raha ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena dia mahantra ny vahoaka, misy ny valanaretina izay mandripaka ny olona, inona anefa no tokony ataontsika amin’izany?
Mbola hamafisiny sy asehon’ Andriamanitra ny kapoka, mihapotika sy rava ny zavatra rehetra.
Rehefa tsy manorina ny fiainana amin’ny Tenin’Andriamanitra isika dia avelany hijaly. Navelany ho babo sy hanompo ny firenena hafa mba hahatsiarovany an’Andriamanitra. Ny bokin’ny Hebreo dia manaza ny fanatitra, fibebahana, fifonanana mba hahafahana mandray fanadiovana sy miverina amin’ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra.
Araka izany, ny fiadanana mety mandatsa, mila miala amin’ny zavatra manahirana isika. Noho izany, andeha isika hifampivavaka, hivavaka ho an’ny Fiangonana, hiantso ny fifadiankanina lehibe, hangataka amin’Andriamanitra ny handevenana ny herin’ny ratsy. Tsy maintsy hirosoana ny fampihavanana satria asan’ny Fiangonana izany ary apetraka eo am-pelan-tanan’ny Tompo. Aoka hiaiky ny heloka amin’Andriamanitra isika na ny mety na tsy mety tanteraka sao dia manadino an’Andriamanitra.
Taorian’ny feon-javamaneno fohy sy ny vavaka fifonana sy famelan-keloka ary setrin’ny Tenin’Andriamanitra dia nanao ny anjara hirany ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly “Trouver dans ma vie dans ta présence”. Nanavao ny fanoloran-tena tamin’ny fanekem-pinoana laharana fahatelo niarahany niredona ny Fiangonana.
Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, RAKOTOMANANA Andry no nanao ny filazan-draharaha taorian’ny andinin-tSoratra Masina IKoritiana 1:3 “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ». Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavin’ ny finoana:
06 martsa : fiofanan’ny Diakona sy Loholona ao amin’ny FJKM Itaosy;
07 martsa : Fanokanana Diakona mirahalahy amin’ny fanompoam-pivavahana 10 ora;
Sampana Vokovoko manga sy Rantsana Fanantenana : taratasy fisaorana noho ny antsam-piderana natao ny alahady 21 febroary
Komitin’ny fankalazana ny 160 taona ny Fitandremana Amparibe famonjena : mitohy ny fandraisana ny hira faneva.
Nisy ny fanentanana ny 5 minitran’ny fahasalamana izay notontosain’ny Ratsimba Soarilandy.
Rakitra sy fanomezana (voady)
Nohoraina ny hira nangatahan’ny mpianakavy ny finoana izay nanao voady: “Mialoka aminao“. Ary natolotra ny fanatitra tamin’ny alalan’ny hira 434:4 “Ry foko ry Mpamponjy”.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana ho an’ny Akany fitaizana zaza kamboty, ny Fiangonana na ny eto an-toerana na ny any ivelany Madagasikara, ireo hiditra sy hianatra Laika, ny hetsika izay ataon’ny komity faha 160 taona FJKM Amparibe Famonjena. Nentina am-bavaka ihany koa ny Synoda lehibe FJKM izay hotanterahina any Sambava ny volana aogositra, ireo Malagasy tratry ny kere (ara-panahy, ara-tsakafo), ny areti-mandoza mahazo ny firenena sy maneran-tany, ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo, ny tratry ny tsy fidiny sy ny tsindry hazo lena mba hahita vahaolana, ireo manana hataka manokana ary ireo nanao raki-pisaorana.
Nofaranany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Nohiraina ny hira 813:1-3 ary niroso tamin’ny Sakrametan’ny Batisa:
RANDRIANTAHINA Fitia Arikaelle
RAKOTOBARY Hanitra Jacintha
RAKOTOBARY Malala Ismaelà
Natao ny hira FFPM 499:3 “O, ry Jesosy Tompo tsara o!” ary noredonin’ny Fiangonana niaraka ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano ary nohiraina ny hira FFPM 760:3-4: “Aza mba manadino” izay nofaranana tamin’ny “Amena”.
Fanamafisam-peo: RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa
Mpitendry orga: RANAIVOSON Jacky
Naka sary : RABEMANANORO Jonathan & RAKOTONDRAMBOA Andry